China simbi wedge vagadziri uye bhizimisi | Bocheng Co-chisikwa
Simbi wedge inonyanya kushandiswa mune yekutanga nguva yekuvaka yemagetsi magetsi kugadzirisa fananidzo yesimbi matanda kana kuisa nekugadzirisa michina michina uye michina maturusi. Simbi oblique simbi inonyanya kushandiswa pakuisirwa uye kugadzirisa kwesimbi simbi, pamwe nekumisikidza uye kugadzirisa kwemidziyo; hunhu ndehwekuti: kutsetseka pamusoro, kunyatsoita mushe, hapana mabhureki kutenderedza, kuomarara kwakanaka, uye nyore kushandisa
Unyanzvi zvinodiwa zveSimbi wedge: iko kurongeka kwakatemwa zvinoenderana nezvinodiwa, nekuti wedge inowanzo shandisa ekumusoro uye ezasi mativi, saka izvo zvinoda mativi mana kazhinji hazvina kukwirira, uye hukasha hwesimbi wedge ndeye 6.4; Iko kusanzwisisika kwenzvimbo dzekumusoro uye dzakadzika dze wedge ndeye 12.5, 6.4, 3.2, 0.8, nezvimwewo, kana iko kurongeka kuri pamusoro, kumeso uye kuenzanisa kwesimbi simbi inogadziriswa neiyo grinder inogona kusapfuura 0.03mm. Ukobvu hwesimbi wedge hunogona kutemerwa zvinoenderana nezvazvinodiwa chaizvo uye zvinhu uye kutaurwa kwechinhu; iwo mutserendende wedare resimbi unofanirwa kuva 1 / 10-1 / 20, iyo simbi wedge yekudengenyeka kana chaiyo midziyo Iyo yakatenuka yeiyo shim) inogona kuve 1/40. Paunenge uchishandisa simbi wedge, inofanirwa kushandiswa pamwe chete neiyo flat shim yeiyo yakafanana tsananguro. Iyo simbi wedge inofanira kushandiswa vaviri vaviri. Iyo yakatenuka inofanirwa kushandiswa.
Iwo madhirowa esimbi wedge akagadzirwa zvinoenderana neicho chaicho michina yezvigadziro zvinodiwa, uye zvobva zvagadziriswa zvinoenderana nemadhirowa.
Mashandisiro ekushandisa iyo simbi wedge
Isa shiti yakati sandara pahwaro hwekongiri, uye wozoisa maviri esimbi wedge pane flat shim. Kana uchigadzirisa, shandisa sando kurova maviri esimbi wedges, iwo mutserendende wedare wedare unoshandiswa kusimudza kana kudzikisa michina kuzadzisa chinangwa chekugadzirisa iyo nhanho. Mushure mekunge danho ragadziriswa, tarisa weld simbi wedge neiyo hwaro hwemidziyo kuti iyo shim isimbe uye yakasimba. Chekupedzisira, inodururwa nekongiri yekuchengetedza michina iri padanho rakanaka panguva yekushanda, kudzora kupfeka kwemuchina uye kubvarura, uye kudzikisa mutengo wekutsiva zvikamu zvemidziyo.
Pashure: Ruoko rwakarukwa simbi pamusoro peplate
Zvadaro: Lapping kukandira simbi pamusoro ndiro